Ny saka manga rosiana | Noti saka
Ny saka manga rosiana
El saka manga rosiana izy, miaraka amin'ny Persiana, hazakazaka tena andriana. Ary tsy ny toetrany tony sy tso-po fotsiny no tiako horesahina, fa ny fandehanany sy ny vatany mahia ihany koa. Ny endrika ananan'ity lehilahy volom-borona ity dia mahavariana, fa miaraka amin'izay, afaka mampitony ireo mila azy.
Tia olona sy be fitiavana, ny saka manga rosiana dia tia nofosafoina ary indrindra hampianarina zavatra. Te ho mpampianatra azy ve ianao?
1 Ny niandohany sy ny tantaran'ny saka manga rosiana
2 Toetra mampiavaka ny saka manga rosianina
3 Mandra-pahoviana ny saka manga rosiana no velona?
4 Rosiana saka manga manga
5 Fikarakarana saka manga rosiana
6 Fahasalamana saka saka Rosiana
7 Moa ve ny saka manga rosiana miteraka tsy fahazakana?
8 Ohatrinona ny saka saka rosiana manga?
9 Sarina saka saka manga rosiana
Ny niandohany sy ny tantaran'ny saka manga rosiana
Na dia mbola tsy fantatra marina aza hoe avy aiza izy, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tany Arkhangelsk (Russia) kopia vitsivitsy no novidiana ary nentina tany Angletera. Nanomboka teo dia nihamaro ny olona liana tamin'izy ireo, ary tamin'ny 1880, sambany naseho izy ireo.
Saingy, tamin'ny taona 40 dia tandindomin-doza ho lany tamingana ity karazana ity noho ny Ady Lehibe Faharoa. Mba hisorohana izay tsy isalasalana fa nahatonga loza dia nifampiraharaha tamina saka siamese izy ireo. Taona vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny taona 1970, dia azo natao ny niasa indray hamerina ilay Rosianina Rosiana madio, ary tamin'ny 1984 dia azo nekena tamin'ny fomba ofisialy izy ireo toy ny hazakazaka.
Toetra mampiavaka ny saka manga rosianina
Ny saka manga rosiana dia saka anelanelan'ny lehibe ary lehibe ny lanjany 3,5kg ho an'ny vehivavy, ary 7kg ho an'ny lehilahy. Kely ny loha, misy karan-doha, ary maso maitso maitso, misaraka be nefa tsy mahatratra ny tendrony.
Izy io dia manana vatana lava sy matanjaka, manana tongotra lava, ary rakotra volony fohy sy matevina ary fotsy volo. Ny sasany mety manana taratra volafotsy ihany koa, izay no antsoina volafotsy mitete, fa ekena kokoa fa manana saka mitovy manga ny saka.
Mandra-pahoviana ny saka manga rosiana no velona?
Ny androm-piainan'ny saka manga rosiana dia 15 hatramin'ny taona 20, noho izany dia mitovy amin'ny an'ny firazanana hafa toa ny eropeana iraisana. Vaovao tsy isalasalana fa vaovao tsara io, satria efa ho roapolo taona izao dia ho afaka hankafy ny hatsarana sy ny hamamin'ity biby ity ianao.
Rosiana saka manga manga
Ny saka manga rosiana dia milamina tokoa, fa tsy matoky koa amin'ireo olona sy biby tsy fantatrao ireo. Afaka mifandray tsara amin'izy ireo ianao raha mbola mitsabo anao moramora, tsy misy maimaika na fihenjanana; fa raha tsy izany, ny hisioka, ny alahelo, sns.
Noho ireo antony ireo dia saka izay hiaina tsara indrindra amin'ny fianakaviana izy - na manan-janaka izy na tsia - mangina, tia mandany fotoana amin'ny sakaizany tongotra efatra (ohatra, rehefa mijery fahitalavitra na mamaky boky), fa tsy mandresy anao. Ary raha mikasa ny hampitombo ny fianakaviana ianao, miaraka amin'ny sasany torolàlana momba ny fiaraha-monina azonao atao ny maka ny saka ho sakaizany amin'ny mpikambana vaovao atsy ho atsy.
Fikarakarana saka manga rosiana
Mila sakao madio sy madio ny saka rosianina manga, sakafo fidiovana ary fanosotra isan'andro. Fa ankoatra ireo fikarakarana fototra telo ireo, ilaina ny mitondra azy any amin'ny vet, amin'ny maha alika kely azy mba hahazoana ny vaksiny rehetra, ary rehefa olon-dehibe indray mandeha hijerena ny fahasalamany.
Ny olana lehibe iray hafa izay tsy azontsika hadino dia ny lalao. Na dia saka milamina aza dia aza avela mankaleo azy. Ny biby mankaleo dia biby izay tsy ho ela hanao zavatra izay tsy tokony hataony, toy ny fikororohana ny fanaka na ny hanaikitra.
Ao amin'ny magazain'ny biby fiompy dia hahita kilalao tsy tambo isaina ianao, toy ny tondro laser, baolina, biby tototry, tady, lalao fifaneraserana ... Vidio ireo tianao indrindra ary manokana fivoriana fohy maromaro isan'andro hankafizanao ny sainao. Azonao atao koa ny mampianatra azy handidy, toy ny fipetrahana na ny fandakana ny baolina.
Fahasalamana saka saka Rosiana
Ny saka manga rosiana dia afaka mirehareha amin'ny maha iray amin'ireo karazan'olona malaza indrindra izay salama tsara. Izany dia vokatry ny ampahany amin'ny hoe ny olombelona dia saika tsy nanova azy io. Tandremo anefa fa tsy midika akory izany fa tsy harary ianao, lavitra azy io. Izy io dia zavamananaina iray, ary toy ny olon-drehetra dia mety harary, na hanana lozam-pifamoivoizana.
toy izany Manomboka amin'ny fotoana voalohany hitanao na hitanao fa tsy salama izy dia tokony hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby ianao. Ny aretina mahazatra indrindra amin'ny felines dia ny sery, otite, conjunctivitis, ary ny gastrointestinal olana. Raha mahazo ny vaksiny ilaina ianao dia azo arovana tsara amin'ny viriosy izay miteraka aretina lehibe hafa, toy ny immodeodeidie feline na voan'ny kanseran'ny ra.
Moa ve ny saka manga rosiana miteraka tsy fahazakana?
Ny allergy saka dia olana lehibe tokoa ho an'ireo izay mankafy ireo biby ireo. Fa afaka matoky ianao, satria ny manga Rosiana dia manana palitao misy sosona roa mifanakaiky akaiky ary, ankoatr'izay, matevina, noho izany ny habetsaky ny volony very dia kely lavitra noho ilay very tamin'ny karazany hafa.
Fa raha toa tsy dia kely loatra aminao ity dia tokony ho fantatrao izany tsy mamokatra glyprotein kely kokoa Fel D1, izay no miteraka soritr'aretin'ny allergy. Izany dia mahatonga azy io hoheverina ho saka hypoallergenic.
Ohatrinona ny saka saka rosiana manga?
Hividy saka manga rosiana ve ianao ary te hahafantatra hoe ohatrinona ny vidiny eo aminao? Raha izany dia tokony ho fantatrao fa raha hividy azy amin'ny fantsom-panafody ianao dia manodidina ny vidiny 700 euros. Raha toa ka aleonao maka azy any amin'ny magazay biby, dia hidina io vidiny io, manodidina ny 500 euro.
Sarina saka saka manga rosiana
Ny saka manga rosiana dia biby manintona, noho izany tsy afaka namarana ny lahatsoratra izahay raha tsy nanome anao galerie voalohan'ity volony ity. Manantena izahay fa tianao izy ireo:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ny saka manga rosiana
nify Center dia hoy izy:
Naka saka mitovy amin'ny iray amin'ny sary faharoa aho. Mavitrika sy mahatsikaiky tokoa izy, vao tsy ela akory izay dia nanolotra olana parasitika izy noho ny toe-piainany taloha. Talohan'izay dia tsy tiako ny saka, fa miaraka amin'ny Leoncio ahy dia tena faly aho. Hahafantatra zavatra betsaka momba azy ireo ao amin'ilay tranonkala aho.
Valin'ny foibe nify
Manana zanak'akanjo mahafatifaty aho izay tsy fantatro hoe karazany inona io omaly io fa nisy olona nandalo ary nilaza tamiko fa manga rosiana io, sivy ambin'ny folo no anarany ary azoko tsara izao hoe nahoana rehefa nivoaka niaraka tamin'ny vadiko aho dia nitomany ny alina talohan'ny namoahanay azy tany ivelany sy ny fifaliako dia tiako be izy ireo dia biby tsara tarehy ny saka rehetra, indrindra fa ny sivy ambin'ny folo taonako
FANomezana saka ROSY 2 ROSY
Manana toetra tena tsara izy ireo ary be fitiavana. Lehilahy sy vehivavy izy ireo. Vaksinina izy ireo, omena volom-borona, sterilized ary manana puce.
Tena nahita fianarana izy ireo. Niara-nipetraka tamiko foana tao amin'ny tranon'ny fianakaviana izy ireo hatramin'ny nahaterahany 4 taona lasa izay. Ka dia mailo be ry zalahy tanora tsy tokony ampianarina hanao "zavatra kely" ao anaty boaty fasiny. Tsy mbola nanaikitra na nanakorontana olona akory izy ireo satria mamy teo amin'ny manodidina azy ireo ihany.
Tena ankafizin'izy ireo ny mijery, manaraka anao, ary mikorisa eo akaikin'ny tongotrao mba hikarokaranao azy ireo.
Nomeko azy ireo izy satria roa taona lasa izay dia nanana allergy aho. Na dia nanandrana nandresy azy aza aho dia lasa bebe kokoa. Ary tsy afaka manome azy ireo intsony ny saina sy ny fitiavana mendrika azy ireo aho.
Mitady trano ho antsika roa aho. Mpirahalahy izy ireo, niaraka foana izy ireo ary izany no tian'izy ireo atao. Mifankahazo tsara izy ireo. Ary ny saka roa dia fitambarana tonga lafatra hifaneraserana raha tsy ao an-trano ianao ary hahazo avo roa heny ny fanararaotana rehefa mody.
Olona matotra sy tompon'andraikitra maniry hanome sy handray fitiavana be dia be.
Vonona ny hanafaka any Barcelona ireo zana-kisary.
Selenah dia hoy izy:
Ny sarin'ireo heverina fa saka manga rosiana manana maso manga dia tsy an'ny karazany ireo, saka chartreux izy ireo, izay karazany hafa ary volomboasary ny mason'izy ireo.
Valiny tamin'i Selenah
Ahoana no hahalalanao ny halehiben'ny saka
Inona no tokony hohanin'ny saka bevohoka